यसरी लाग्दै छ नेकपा एकताको तीन दिन भित्र टुंगो || सुनौलो नेपाल
यसरी लाग्दै छ नेकपा एकताको तीन दिन भित्र टुंगो
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता तीन दिन भित्र टुंगो लाग्दैछ । सोमबार नेकपामा सचिवालय बैठक बस्दैछ । सचिवालय बैठकले पार्टी एकताको बाँकी काम टुंगो लगाउँने छ ।
कार्ल माक्र्स २०१ जन्मस्मृति कार्यक्रमलाई समबोधन गर्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकताको बाँकी काम तीन दिनभित्रमा टुंगो लाग्ने बताए । समृद्धि र समाजवादः हामी कहाँ छौं ? भन्ने शिर्षकमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष दाहालले एकताको बाँकी काम सोमबार बस्ने सचिवालय बैठकले टुंगो लाउँने बताए ।
‘हामीले आईरन गेटको रुपमा रहेको जिल्ला कमिटीको नेतृत्व टुंगो लगायौं, सबैभन्दा अप्ठयारो काम नै जिल्लाको नेतृत्व टुंगो लगाउँनु थियो’ दाहालले भने, ‘अब बाकी रहेका काम दुई तीन दिन भित्रमा टुंगो लगाउँछौं, भोली सचिवालय बैठक बस्दैछ, टुंगो लाग्छ ।’
यस अघि नै सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीको घोषणा भईसकेको छ । अब पोलिटव्युरो कमिटी, बिभाग, प्रवास, केन्द्रीय सदस्यहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड, जनवर्गीय संगठन सहित स्थानीय तहको एकता अझै टुंगो लागेको छैन् । यो समचार आजको राजधानी दैनिकले लेखेको छ।
नेकपा अध्यक्ष दाहालले सबै अप्ठयारो काम सकिएको बताउँदै बाँकी रहेका काम टुंगो लगाउँन गाहरो नभएको बताए । पार्टीको बैचारिक बिषयमा छलफल नभएको भन्ने गुनासो आएको बताउँदै उनले अब त्यस बिषयमा बहस शुरु हुने बताए ।
५÷६ महिना भित्रमा जिल्ला अधिबेशन दुत गतिमा गरिने बताउँदै सोही क्रममा पार्टीको बैचारिक बिषयमा बहस पनि शुरु हुने बताए । पार्टीमा बैचारिक बिषयमा कुनै बिवाद नभएको बताउँदै उनले पुँजीबाद र समाजवाद पक्षमा बहस शुरु गर्न आह्वान समेत गरे ।
सोम, बैशाख २३, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस
संविधान दिवस मनाउन छातीमा नेपालको झण्डा टाँसेर आउ !
संसदमा प्रश्न – नेपाल प्रहरी हो कि नेकपाको भातृ संगठन ?